ခေါင်းအုံး / Flow ထုပ်ပိုးစက်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China ခေါင်းအုံး / Flow ထုပ်ပိုးစက်ထုတ်လုပ်သူများ
အလိုအလျောက် Flow အစားအစာထုပ်ပိုးစက်
Kd-350 အလိုအလျောက်အစားအစာထုပ်ပိုးစက် ၁။ ကုန်ပစ္စည်းပုံ ၂။ စက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၃။ ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ - ၄။ ထူးခြားချက်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် - cheching function ကို, ဒုက္ခအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာ photoelectric ...
Autaomtic Horizental Flow Packing / ထုပ်ပိုးစက်
KD-350 အလိုအလျောက်အလျားလိုက်စီးဆင်းမှုခေါင်းအုံးထုပ်ပိုးစက်1။ ကုန်ပစ္စည်းပုံရိပ် ၂။ အသုံးချမှုနယ်ပယ်။ (ကွမ်း၊ သံလွင်သီး၊ သကြားလုံးသကြားလုံး၊ gong ရက်စသည့်) ပစ္စည်းလုပ်ကွက်များကိုပိုမိုသုံးပါ၊ အထုပ်အပိုးမျိုးစုံ၊ အစိုင်အခဲကွဲနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ ၃။ အင်္ဂါရပ်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ဒါ ado ...
အလိုအလျောက် Horizontal Flow ခေါင်းအုံး Bakery ပေါင်မုန့်ဘီစကွတ် Cookies ထုပ်ပိုးစက်
အလိုအလျောက်အလျားလိုက်အလျားလိုက်စီးဆင်းမှုခေါင်းအုံး Bakery မုန့်ဘီစကွတ် Cookies ထုပ်ပိုးစက် 1. ထုတ်ကုန်ပုံရိပ်: 2. လျှောက်လွှာ၏နယ်ပယ်: 3. အင်္ဂါရပ်များ: ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံ, တည်ငြိမ်သော function ကိုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် - cheching function ကို, ဒုက္ခအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဟ ...
Kd-260 / Kd-350 / Kd-450 Servo Motor PLC Flow Wrapping Packing Machine
Kd-260 / Kd-350 / Kd-450 Servo Motor PLC Flow Wrapping Pack1 Machine1 ။ ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ်: ၂။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ၃ ။ ထူးခြားချက်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် - cheching function ကို, ဒုက္ခအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အမြင့်အာရုံခံကိရိယာဓာတ်ပုံ ...
အလိုအလျောက်မွေးနေ့အရောင်ဖယောင်းထုပ်စက် Flow Wrapper
KD-260 အလိုအလျောက်အလျားလိုက်ခေါင်းအုံးထုပ်ပိုးစက် ၁ ။ ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ်: ၂။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ၃ ။ ထူးခြားချက်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် - cheching function ကို, ဒုက္ခအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာ photoelectric အရောင် cha ...
အနိမ့်စျေး Flow ထုပ်ပိုးစက်
ဘီစကွတ် Wafer Spooncake ကိတ်မုန့် Autoamtic ထုပ်ပိုးစက်
KD-260 ဘီစကွတ်မုန့်ဖုတ်ထားသောဇွန်းကိတ်မုန့်အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးစက် ၁ ။ ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ်: ၂။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ၃ ။ ထူးခြားချက်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် - cheching function ကို, ဒုက္ခအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာ photoelectric ...
ရေမြှုပ်ထုပ်ပိုးရန်အတွက် Ydiao သံမဏိစက်များ
ရေမြှုပ်ထုပ်ပိုးမှုအတွက် YDIAO သံမဏိစက်များ ၁ ။ ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ်: ၂။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ၃ ။ ထူးခြားချက်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်တိုင် - cheching function ကို, ဒုက္ခအလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မြင့်မားသောအာရုံခံကိရိယာ photoelectric အရောင်ဇယား ...
Toast, Sliced ​​Bread အတွက်ခေါင်းအုံးအမျိုးအစားပလပ်စတစ်ရုပ်ရှင်စီးဆင်းမှုထုပ်ပိုးစက်
Bakery Machinery Automatic Cracker Toast Packaging Machine ခေါင်းအုံး Multi-Pack Horizontal Flow Bread Wrapper
Bakery Machinery Automatic Cracker Toast Packaging Machine ခေါင်းအုံး Multi-Pack Horizontal Flow Bread Wrapper1 ။ ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံရိပ်: ၂။ လျှောက်လွှာနယ်ပယ် - ၃ ။ ထူးခြားချက်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းခုတ်ဖြတ်, မလိုအပ်သောညှိနှိုင်းမှု, အချိန်နှင့်ရုပ်ရှင်ချွေတာ။ ၎င်းသည်တင်သွင်းထားသောလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ ထိတွေ့မှုရှိခြင်း၊ Self-cheching function, ပြtroubleနာက ...
အပိုပစ္စည်းများထုပ်ပိုးစက်အပိုပစ္စည်းများ, လက်ကိုင်ထုပ်ပိုးစက်, အလိုအလျောက်ဟာ့ဒ်ဝဲ Flow ထုပ်ပိုးစက်
အပိုပစ္စည်းများထုပ်ပိုးစက်အပိုပစ္စည်းများ, လက်ကိုင်ထုပ်ပိုးစက်, အလိုအလျောက်ဟာ့ဒ်ဝဲစီးဆင်းမှုထုပ်ပိုးစက်1။ ကုန်ပစ္စည်းပုံရိပ် ၂။ အသုံးချမှုနယ်ပယ်။ (ကွမ်း၊ သံလွင်သီး၊ သကြားလုံးသကြားလုံး၊ gong ရက်စသည့်) ပစ္စည်းလုပ်ကွက်များကိုပိုမိုသုံးပါ၊ အထုပ်အပိုးမျိုးစုံ၊ အစိုင်အခဲကွဲနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ ၃။ အင်္ဂါရပ်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller, အထုပ်၏အရှည် setting ကိုတစ်ချိန်ကချက်ချင်းဖြတ်မည်, ...
KD-260 စက်ထုပ်ပိုးစက်လက်သုတ်ပုဇွန်ဓါးထုပ်ပိုးစက် ၁ ။ ကုန်ပစ္စည်းပုံရိပ် ၂။ အသုံးချမှုနယ်ပယ်။ (ကွမ်း၊ သံလွင်သီး၊ သကြားလုံးသကြားလုံး၊ gong ရက်စသည့်) ပစ္စည်းလုပ်ကွက်များကိုပိုမိုသုံးပါ၊ အထုပ်အပိုးမျိုးစုံ၊ အစိုင်အခဲကွဲနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ ၃။ အင်္ဂါရပ်များ - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု။ နှစ်ဆကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက် Controller၊ အထုပ်၏အရှည်သည်တစ်ချိန်ကချိန်ညှိမှုတစ်ပြိုင်နက်ချက်ချင်းဖြတ်မည်။